Sawirro: Farmaajo oo farriin diray kahor doorashada - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Farmaajo oo farriin diray kahor doorashada
Sawirro: Farmaajo oo farriin diray kahor doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta ka qayb-galay munaasabad lagu xusayey 79 guurada ka soo wareegtay aas aaska Ururka Dhallinyaradii SYL, taas oo lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Farmaajo oo maanta ka qayb-galaya tartanka doorashada madaxweynaha ayaa taalada SYL dhigay ubax lagu maamuusayey doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee xorriyadda Somalia.
Qoraal kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale farriin loogu diray guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, wuxuuna ku booriyey inay wax ka bartaan sooyaalkii halgan ee geesiyaashii SYL, sidoo kalena uu jiilba, jiilka ka dambeeya dhaxalsiiyo, maamuuskooda, taariikhdooda, halgankooda iyo dhaxalkii waddaniyadeed ee ay inooga tageen.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa Taalada Halgameyaashii SYL waxa uu xus iyo duco ugu sameeyey dhallinyaradii 13-ka ahaa ee horseeday xornimada dalka, isaga oo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku dhiirrigeliyey in ay ilaashaadaan midnimada iyo wadajirkooda, oo ah mabaadi’dii saldhigga u ahaa aasaaskii SYL.
Munaasabadda Ubax-dhigga Taalada SYL waxaa Madaxweynaha kala qayb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed, Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo Agaasimaha Guuud ee Madaxtooyada Qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Ciise.
Sanadkan wuxuu xuska 15-ka May kusoo aaday, iyada oo la qabanaayo doorashada xilka madaxweynaha oo ay maanta si weyn ugu loolami doonaan xubno ku dhow 40 musharax.